I-1BR iqulethwe umcaba+umbono 湾景小筑
Isicwangciso esivulekileyo esiziphethe ngokupheleleyo esithe tyaba esijongene nomlambo iGeorges
*Imizuzu eyi-3 ukuhamba okufutshane ukuya kwipaki yamanzi.
*1min ukuhamba ukuya kwindawo yokumisa ibhasi ukudibanisa hub enkulu ye
hurstville(iqeqesha i-15min ukuya kwi-CBD ngqo kwi-Bondi okanye e-Conulla beach) okanye ukuhamba ngokukhululeka kwe-30min.
*I-15mins iqhubela kwisikhululo seenqwelomoya i-30min ukuya kwi-CBD.
* Ukufikelela echibini, indawo yokupaka ephambi kwesitrato elula, indawo yokungena eyahlukileyo kwinqanaba lakho kubandakanya ibalcony yabucala. enye ibhedi ephindwe kabini ibhedi enye yesofa, indawo yokuhlala eyongezelelweyo inokulungiswa.
Isicwangciso esivulekileyo esiziqulathe ngokupheleleyo esithe tyaba esijonge kumlambo waseGeorges, imiz emi-3 ukuhamba okufutshane ukuya epakini yasemanzini.
Indawo yokuhlala ligumbi lokuhlala elikhulu / ikhitshi elinocango oluphindwe kabini oludibanisa i-balcony kwindawo enye evulekileyo yokuhlala, enegumbi lokulala elincinci kunye negumbi lokuhlambela.
Ikhitshi esanda kongezwa ngaphandle kwegesi yegesi kunye negumbi lokuphumla elisecaleni kwechibi lenza ihlobo laseSydney ukuba lonwabe ngakumbi (kwabelwane ngalo nombuki zindwendwe).
4.76 · Izimvo eziyi-184
I-Kyle Bay yindawo eyimfihlo eyimfihlo uninzi lwabahlali be-sydneysider abangazange beve ngayo, indawo yokuhlala eneepaki ezininzi kunye nembono yamanzi ebekwe kufutshane neendawo ezixakekileyo kunye nesixeko. Iphelele kwishishini kunye nokuzonwabisa.
Iflethi ibekwe ngendlela ekhethekileyo ukuze ukonwabele ubumfihlo bakho, kodwa silapha kumgangatho ophezulu nje umnxeba okanye ucango ukuba ufuna nantoni na. Ndijonge phambili ukwabelana ngekofu okanye iti kunye namabali okuhamba anomdla :)
Inombolo yomthetho: PID-STRA-2344
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kyle Bay